things wht i've seen, wht i've felt, wht i've tot changed to...: ဘလော့ရဲ့ အရောင်
တယောက်ထဲနဲ့ဖြစ်သလိုနေတဲ့ အိမ်လေးထဲ အကြောင်းကြောင်းကြောင့် ရောက်လာတဲ့ဧည့်သည်တွေကို ဧည့်ဝတ်မကြေ စိတ်ချမ်းသာမှု မပေးနိုင်ခဲ့ရင် ခွင့်လွှတ်ကြပါလို့....
အရောင်တွေထဲမှာ အကြိုက်ဆုံးက အနီရောင်။ နီတာမှ ရဲရဲနီနေတဲ့ အနီ သန့် သန့် မျိုး။ အနီရောင်ကိုမြင်ရင် စိတ်တွေတက်ကြွလာသလို... စိတ်ဓာတ်ကျနေရင်တောင် အနီရောင်အင်္ကျီဝတ်လိုက်ရင် အားပြည့်လာသလို။ ဒါကြောင့် ဒီဘလော့လေးကို စဖန်တီးခဲ့တဲ့အချိန် အနီကိုပဲသုံးရင်ကောင်းမယ်လို့ စဉ်းစားမိတယ်။ အနီမရှိတော့ အနီးစပ်ဆုံးတူတဲ့ ပန်းရောင်ရင့်ရင့်ကိုသုံးလိုက်တယ်။
ဒါပေမယ့် ဘလော့ဆိုတာ အဓိက က စာရေးစာဖတ်လုပ်တဲ့နေရာ။ မျက်လုံးကိုအားပြုပြီး အလုပ်လုပ်ရတာ။ အနီရောင်ရဲ့စူးရဲမှုနဲ့ ကွန်ပြူတာကို ကြာရှည်အသုံးပြုမှုတွေကြောင့် ကြာရင်တော့ မျက်လုံးထိခိုက်နိုင်တယ်ထင်မိတယ်။ ဒါနဲ့ အရောင်လေးတော့ပြောင်းဦးမှပေါ့...။
ဘာရောင်ပြောင်းရင်ကောင်းမလဲစဉ်းစားလိုက်တော့ ငယ်ငယ်က အကိုတစ်ယောက်ပြောတာကို သတိရသွားတယ်။ ငယ်ငယ်တုန်းက စာကျက်နေရင်း စာလုပ်နေရင်းနဲ့ `မျက်စိညောင်းလာပြီ ..´ လို့ အကိုရှေ့မှာပြောမိတော့ `သွား.. အိမ်ရှေ့ထွက်ပြီး သစ်ပင်တွေကိုကြည့်လိုက်.. အဝေးကသစ်ပင်ကော အနီးကသစ်ပင်ကော အားလုံးကိုသွားကြည့်´ လို့ ပြောတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲလို့မေးဖူးတယ်။ အကိုက `သစ်ပင်တွေက စိမ်းတယ်..။ အဲဒီသစ်ပင်ရဲ့စိမ်းစိမ်းစိုစိုအရောင်တွေက လူရဲ့မျက်စိကို အေးစေတယ်။ အမြင်ကြည်စေတယ်။ မျက်လုံးညောင်းနေရင် သွားကြည့်.. သက်သာသွားလိမ့်မယ်´လို့ ပြောပြတယ်။ ဟုတ်မဟုတ်တော့မသိ.. ဘယ်လိုဆိုင်သလဲမသိ..။ ဒါပေမယ့် နောက်ပိုင်း မျက်လုံးအရမ်းညောင်းလာရင် သစ်ပင်တွေကို လိုက်လိုက်ကြည့်တတ်တယ်။ အကိုပြောတာ ဟုတ်သလိုလိုတော့ရှိသား။ သက်သာတယ်။
ဒါကြောင့် မျက်လုံးကို အသုံးပြုပြီး ရေးရဖတ်ရအလုပ်လုပ်ရတဲ့ ဒီဘလော့မှာ ကြာကြာရေးနိုင်ဖတ်နိုင်အောင်နဲ့မျက်လုံး အားစိုက်ရတာသက်သာအောင် အစိမ်းရောင်ကို ပြောင်းသုံးဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီး အစိမ်းရောင်ပြောင်းလိုက်ပါကြောင်း........။
Posted by sweetpeony at 11:37 AM
MANORHARY Thursday, March 12, 2009 at 2:10:00 PM GMT+8
nyimg Wednesday, April 8, 2009 at 6:02:00 PM GMT+8
အကောင်းဆုံးက ကိုယ့်ပါးကို ခပ်ပြင်းပြင်းဆယ်ချက်လောက်ရိုက်လိုက်တာပါပဲ။
Anonymous Sunday, October 4, 2009 at 3:16:00 PM GMT+8
အနီရောင်ကြိုက်ရင် ကျွဲအုပ်တွေကိုသတိထားရမယ် :P
im smiling but inside im dying
nth special.. juzahuman like u..
The sky is clear now. Birds are singing, trees are...
Lake hid its diamonds, revealed those by sparkling...
who made you angry? crying loudly in red face, bre...
the longest word in english language
Sorting by grouping
MY HAIKU (18)
MY POEM (18)
ကိုယ့်အကြောင်း တစေ့တစောင်း (2)
ဟိုတစ်စ ဒီတစ်စ (2)
ကျောင်းသူ ဘ၀ (1)
I noe wht u r... wht u r babe!!!
Who r online now??!!!
Leave some msg here if u wanna tell me sth!